I-China Ukukhethwa okulungile nokunengqondo nokusetshenziswa kwezindawo ezi-5 zabakhiqizi begilavu ​​abamelana nokushisa okuphezulu nabaphakeli | UJoysun
Ukukhethwa okulungile nokunengqondo nokusetshenziswa kwezindawo ezi-5 zamagilavu ​​amelana nokushisa okuphezulu
Amagilavu ​​agcina ukushisa okuphezulu
Njengoba igama liphakamisa, amagilavu ​​avikelayo okuphepha okushisa aphezulu asetshenziswa ezindaweni ezinokushisa okuphezulu. Izinga lokushisa eliphakeme kakhulu elixubekile lamakhemikhali fibre iminwe emihlanu amagilavu ​​wesundu nenkomba yeminwe yokugqoka emelana nesikhumba, ungakhetha amagilavu ​​ahlukahlukene anezinga lokushisa eliphakeme ngokuya ngokwehluka kwezinga lokushisa lokuxhumana ngesandla. Ngokuvamile, amagilavu ​​agcina ukushisa okuphezulu asetshenziswa emazingeni aphezulu okushisa, emisebeni yokushisa noma ezindaweni ezivutha amalangabi. Ukuze sivikele ukulimala kwesandla, kufanele sisebenzise amagilavu ​​agcina amazinga okushisa aphezulu kahle futhi siqaphele izingozi zezimboni.
Amagilavu ​​amelana nokushisa okuphezulu angahlukaniswa abe yizinhlobo ezine ngokuya ngezinto ezehlukene: amagilavu ​​e-asbestos okushisa aphezulu, amagilavu ​​we-carbon fiber, amagilavu ​​okuvikela ukushisa okuphezulu, amagilavu ​​we-aramid asezingeni eliphakeme lokumelana namagilavu ​​e-glass fiber. Ngokuya ngokusebenza kwamagilavu ​​wokushisa aphakeme kakhulu, ingahlukaniswa: amagilavu ​​avamile okushisa aphezulu, amalangabi amelana nokushisa kwelangabi, amagilavu ​​we-antistatic lokushisa okuphezulu, amagilavu ​​angenalo uthuli, izinga lokushisa elingenalo uthuli. amagilavu, namagilavu ​​alwa nokusika okushisa aphezulu. Izinhlobo ezahlukahlukene zamagilavu ​​amelana nokushisa okuphezulu kufanele zikhethwe ndawonye ngokuya ngemvelo ethile futhi zidinga uhlobo olufanele, ukuze kudlalwe umphumela wazo omuhle, wokuvikela.
Amagilavu ​​okuvikela ukushisa okuphezulu manje asetshenziswa kabanzi futhi asetshenziswa ezimbonini eziningi. Sekuwumkhiqizo obaluleke kakhulu wokuvikelwa kwabasebenzi emsebenzini wokushisa okuphezulu, onganciphisa ngempumelelo izingozi zezimboni futhi uvikele ukuphepha nempilo yabasebenzi nabangane. Amagilavu ​​amelana nokushisa okuphezulu asetshenziswa kakhulu ezindaweni zokusebenza ezinokushisa okuphezulu njengosimende, izinto zobumba, i-aluminium, izitshalo zamandla, ama-petrochemicals kanye ne-welding kagesi.
Lezi zindawo ezinhlanu ezilandelayo zifanele amagilavu ​​asezingeni lokushisa okuphezulu, angakusiza ube nokuqonda okungcono.
Owokuqala: umkhakha we-elekthronikhi namakhemikhali
Izimboni ze-elekthronikhi nezamakhemikhali kufanele zikhethe amagilavu ​​we-anti-static ephezulu okushisa. Lezi zimboni ezimbili zinezici zazo. Ngokuvamile, amagilavu ​​agcina izinga lokushisa eliphakeme kudingeka ukuthi abe nezakhiwo ezinhle zokulwa ne-static. Ngaphandle kwalokho, ugesi omile ungadala umonakalo kumkhiqizo futhi ungadala ukuqhuma. Amagilavu ​​angama-anti-static kanye nokushisa okuphezulu ngokuvamile enziwe ngezinto ze-aramid. Isendlalelo sendawo sakhiwa i-99% ye-aramid fiber kanye ne-1% yocingo oluqhubayo. Inezakhiwo ezinhle zokulwa ne-static, futhi inhle kakhulu ekumelaneni kokugqokwa nokumelana nokushisa okuphezulu.
Uhlobo lwesibili: igumbi elihlanzekile nelabhorethri
Ama-workshops nama-laboratories angenalo uthuli kufanele akhethe amagilavu ​​angenawo uthuli. Zombili lezi zindawo zidinga amagilavu ​​ngokuhlanzeka okuphezulu nokuguquguquka, ngakho-ke amagilavu ​​okushisa aphezulu angenalo uthuli afaneleka ngokwengeziwe. Isendlalelo sangaphandle senziwe ngokumboza noma nge-fiber ye-intambo ye-aramid, ngakho-ke ungqimba olungaphezulu lungavimbela uthuli nama-chips, futhi lungamelana nokushisa okuphezulu okungu-180 degrees, ama-degree angama-300 okuguquguquka, nokusebenza okuhle kakhulu.
Uhlobo lwesithathu: ukusansimbi, ukuphonsa, abasebenzi phambi kwesithando somlilo
Abasebenzi ekusansimbi, ekubunjweni nasezithandweni kufanele bakhethe amagilavu ​​e-aluminium foil angamelana nokushisa. Ngoba indawo yokusebenza yale mboni inemisebe yokushisa enamandla kakhulu, efinyelela kuma-degree angama-800-1000, kepha ayidingi ukuxhumana ngqo nezinto ezinokushisa okuphezulu. Ngakho-ke, ungakhetha amagilavu ​​e-aluminium foil okushisa okumelana nokushisa okuphezulu angakhombisa ngempumelelo imisebe eshisayo. Ingakhombisa ngempumelelo i-95% yemisebe eshisayo futhi ngasikhathi sinye ingamelana nama-degree angama-800 wokushisa kuketshezi oluphezulu ngokushesha. Ingqimba engaphezulu yamagilavu ​​amelana nokushisa okuphezulu ngeke ilimale futhi ishe. Isendlalelo sangaphakathi sifushane. Kungavimba ngempumelelo ukungena kokushisa, futhi kunganika umsebenzisi isikhathi sokuzikhulula ezandleni ukugwema ukusha kwezinga lokushisa okuphezulu, okuvikela kahle umsebenzisi.
Okwesine: imboni yengilazi
Imboni yengilazi kufanele ikhethe amagilavu ​​angama-300-500 degree aramid okushisa okuphezulu okumelana namagilavu. Kule mboni, ukumelana nokushisa okuphezulu kwamagilavu ​​amelana nokushisa okuphezulu kuncane kakhulu, futhi ukusebenza kwawo ngokuqinile nokusebenza okulwa nokusika kuphakeme kakhulu. Ngakho-ke, kufanelekile ukusebenzisa amagilavu ​​we-aramid okushisa okukhulu okumelana namagilavu. Amagilavu ​​we-Aramid okushisa aphakeme kakhulu anokuqina kokushisa okuphezulu nokusebenza okulwa nokusika, indawo ithambile, ungqimba lwangaphakathi lukhululekile, futhi ukuguquguquka kwamagilavu ​​nakho kuhle.
Okwesihlanu: imboni ye-photovoltaic
Imboni ye-photovoltaic kufanele ikhethe amagilavu ​​angama-500-degree aramid anokushisa okukhulu noma amagilavu ​​angama-650-degree aramid ahlanganiswe amagilavu ​​ashisa kakhulu. Imboni inezidingo eziphakeme kakhulu zokumelana nokugqoka nokusebenza okuqhubekayo kwamagilavu ​​amelana nokushisa okuphezulu, futhi izinga lokushisa lokuxhumana livame ukuba ngama-degree angama-500-650. Ukukhethwa kwamagilavu ​​we-aramid izinga lokushisa eliphakeme lokushisa kuxhomeke ekuphakameni kokushisa okuphezulu okuphezulu nokugqoka ukumelana. Isendlalelo sokuqina sokushisa esijiyile, ungqimba ebusweni kanye nongqimba wokugqoka kungakhuphula kakhulu impilo yokusetshenziswa okuqhubekayo futhi kungasebenza ngokuqhubekayo. Amagilavu ​​we-Aramid okushisa aphakeme kakhulu nawo amagilavu ​​asetshenziswa kakhulu ekushiseni okuphezulu embonini ye-photovoltaic, futhi ukuzinza kwawo kuqinisekisiwe ngemuva kokusetshenziswa kabanzi.
Lezi ngenhla yizindawo ezinhlanu ezisebenza kumagilavu ​​amelana nokushisa okuphezulu, kanti izinhlobo zamagilavu ​​amelana nokushisa okuphezulu asebenza embonini ngayinye yethulwa ngokuningiliziwe. Kuphela ukukhetha okulungile kwamagilavu ​​okushisa aphakeme, nokusetshenziswa okufanele kungadlala umphumela omuhle wokuvikela. Ukukhethwa okukhethekile kwamagilavu ​​okuvikela ukushisa okuphezulu nakho kudinga ukucubungula izinga lokushisa nesikhathi sokuxhumana nezinto zokushisa okuphezulu, ngakho-ke amagilavu ​​akhethiwe wokushisa aphakeme akhethiwe afanelekile.